120㎡Espace Modern, Toeram-ponenana mampitony eo ambanin'ny fiainana avo lenta | Hongfu Gauge Design - Faucets an-dakozia tsara indrindra 2021 | Faucets efitra fandroana tsara indrindra | WOWOW Faucets
Home / Interior design / 120㎡Ny habaka maoderina, fonenana mampitony eo ambanin'ny fiainana avo lenta | Hongfu Gauge Design
2021 / 05 / 29 FisokajianaInterior design 5557 0
Ny lehilahy tompon-trano dia injenieran'ny zokiolona amin'ny asany. Saika mandany ny faran'ny herinandro rehetra any an-trano miaraka amin'ny vady aman-janany izy. Tiany ny fomba maoderina sy minimalist. Satria eo ambanin'ny fonosana isan'andro misy ny asa avo lenta, ny rivotra iainana tsotra sy milamina dia afaka mampitony ny fanahy mihenjana ary mamela ny ati-doha miaina.
Noho ny tsy fahampian'ny toerana fitahirizana amin'ny fidirana voalohany dia nosoloinay tanteraka ny fomba tany am-boalohany ary nohavaozinay ho lasa faritra miovaova + kiraro fitahirizana 2705mm ny halavany. Izy io dia aseho amin'ny loko fotsy mamirapiratra miaraka amin'ny loko hazo. Avy amin'ny varavarana fidirana dia miverina amin'ny mangina ny tabataba, mamorona toetra mahafinaritra, manintona ary kanto.
Amin'ny vanim-potoana iainan'ny birao isan-karazany, miova miadana ihany koa ny fahazarana miaina. Ny rindrina fahitalavitra sy ny rindrin'ny sofa tany am-boalohany dia navadika tamin'ny toerany hanovana ny tsipika fiankinan-doha amin'ny sisin'ny efitrano fatoriana sy fandalinana. Amin'ny fampiasana ny halavan'ny kabinetran'ny 9575mm, ny vavahady fidirana sy ny TV dia mitambatra amin'ny lafiny iray. Izany dia manafina ny fandalinana sy ny efitrano fatoriana tompony ao anatiny, manome dikany mahaliana kokoa ny habaka.
Amin'ny rihana faha-19 amin'ny rihana avo dia mampitony ny jiro avy amin'ny varavarankely lehibe. Ny gorodona, ny rindrina ary ny valindrihana dia nosoloina fitaovana mora kokoa amin'ny tontolo iainana satria vao roa taona monja ilay zaza. Ny tsipika madio, mafy, vera, hoditra, vatolampy ary veneer hazo dia nohavaozina, ary ireo fitaovana voajanahary sy loko hafa dia manome ny habaka fandraisam-bahiny ho ambaratonga ambony kokoa.
Ny antsipiriany rehetra eny amin'ny habakabaka dia mampiseho ny hakanton'ny fampidirana. Ny drafitra loko voajanahary dia tsy manamora ny fialan-tsasatry ny olon-dehibe fotsiny, fa mamela ny ankizy hahatsapa ho akaiky sy hiadana ihany koa. Na irery na miaraka amin'ny fianakaviana dia hahatsapa ho mahazo aina kokoa izy ireo vokatr'izany.
Mahatsapa ny fifandraisana misy eo amin'ny hazavana sy ny habakabaka. Ny rindrin'ny efitrano fisakafoanana dia vita amin'ny marbra miaraka amina voajanahary voajanahary, izay tsy mitovy amin'ny vato fisaka amin'ny efitrano fandraisam-bahiny. Ny sosona mifanohitra dia manasongadina ireo singa samihafa.
Ny sideboard dia natao ho 2730mmx350mmx1100mm hitehirizana ny fitaovan'ny ankizy isan'andro. Ary ny latabatra malalaka dia mitazona ny vokatra elektrika amin'ny fanaovana sakafo fanampiny, miaraka amin'ny socket magnetika, azo adika amin'ny rindrina araka izay itiavany azy, mitahiry toerana ary mora ampiasaina.
Ny varavarana tsy hita maso dia manasaraka ny efitrano fatoriana sy ny habaka fandalinana amin'ny sehatra ho an'ny daholobe, izay mahatonga ny tsipika mavitrika tena mahaliana. Toa fomba fijery tsy voasakantsakana io, fa toerana manokana ihany koa. Afa-tsy ireo mpiorina ihany, tsy misy mahita avy hatrany ny toerana marina misy ny varavarana rehefa mitsidika voalohany.
Manana efitrano malalaka ny efitrano fandraisam-bahiny, noho izany dia nampiasainay ny velaran-tany 3m² handrafetana efitrano fizahana miendrika L 2100mmx600mm. Ny efitrano fatoriana dia novana ho efitrano fandroana misy efitra fandroana sy efitrano fisainana hampiasaina.
Ny rindrina eo ambonin'ny farafara dia natao ho fonosana mafy volondavenona, izay toa madio sy madio miaraka amin'ny tampony fotsy mamirapiratra. Mba tsy hiseho ho monotonous dia nasiana panne miaraka amin'ny loko mifangaro ny gorodona. Ny atmosfera malefaka dia manala ny hatsiaka entin'ny maoderina ary mahatonga ny toerana fatoriana ho milamina sy milamina.
Ny vavahady avaratry ny fandinihana dia tazonina, ary avy eo ivelan'ny varavarana tsy hita maso dia azo zakaina ampiasaina amin'ny efitrano fandraisam-bahiny lehibe izy io, saingy avy ao anatiny dia mijanona ho toerana tsy miankina. Ny lafiny 3270mm manohitra ny rindrina dia natao ho toerana fitahirizana iray manontolo, ary fandriana mikorisa mihetsiketsika no apetraka ao ambanin'ny kabinetra. Mitana ny andraikitry ny efitrano fatoriana faharoa izy io nefa tsy misy fiatraikany amin'ny habaka.
Matory vetivety miaraka amin'ny ray aman-dreniny ao amin'ny efitrano fatoriana lehibe ilay zaza, ary ny efitranon'ny ankizy no faritra filalaovany mandritra izao fotoana izao. Noho izany, namolavola ny ilan'ny rindrina hosodoko amin'ny solaitrabe izahay ary nanolotra sary natiora mahafinaritra teo amin'ilay mpizara. Etsy ankilany, nametraka boky sy kilalao misy sary izahay, ary ny atmosfera amin'ny ankapobeny dia mahafinaritra sy miala sasatra. Toy ny paradisa kely ao an-trano izany.
▲ Rafitra niandohana
Ny kabinetra kiraro fidirana voalohany dia nesorina ary namboarina ho toy ny kabinetra fitehirizana mifangaro amin'ny rindrin'ny TV. Nampiasa ny varavarana tsy hita maso izy mba hampisarahana ny habaka ampahibemaso sy ny habakabaka tsy miankina ary hanatsara ny fari-piainan'ny trano iray manontolo.
Avy amin'ny fisaka ka hatramin'ny refy telo, dia nanisy varavarana tsy hita maso izy mba hizara roa ny habaka tany am-boalohany, hanatsara ny firafitra sy ny fipetrahana. Novany ho lasa toerana vaovao isan-karazany sy mahaliana ilay trano fonosana taloha sy manjavozavo. Namboarinay ny valindrihana, ny rindrina ary ny gorodona, arakaraka ny fepetra takian'ny tompony amin'ny rivo-piainan'ny trano. Tsy toy ny maoderina mangatsiaka mahazatra, ny paleta miloko voajanahary mafana dia ampiasaina ho toy ny loko loko, ary avy eo ampidirina ny fahanginan'ny akora hazo. Amin'ny alàlan'ny fizarana, fampifangaroana ary fampidirana ireo akora hafa, dia mihasosotra sy manja ny habaka, mba hahitana rivo-piainana milamina sy marefo amin'ny fiainana ho an'ireo mponina ary hanatsara ny fiadanam-panahy anaty.
Karazana: efitrano efatra sy efitrano roa
Vidiny: 40w (fandravana feno ny trano voaravaka tsara)
Fomba serivisy: trano nohavaozina, famolavolana feno, fananganana mafy
Adiresin'ny tetikasa: Chengdu. Poly Xigong Mansion
Previous :: Kompleks iray mandeha amin'ny habakabaka mikoriana amin'ny hery mahery vaika | Tikai Interior Design Next: Geometry + Loko mafana sy mangatsiaka, manamboara fihetsem-po aesthetic madio | Haili Design